Ahoana no fiasan'ny fihenan-danja? - azontsika ny vatana
Fomba mahomby amin'ny fandoroana tavy Ny fihenan'ny lanja (na ny tavy mirehitra) dia mitranga rehefa manomboka mampiasa ireo tahiry azo ampiasaina ny vatana mba hiteraka angovo. Tsy mora ny manao azy hanao izany. Ilaina ny mamorona tsy fahampian'ny kaloria entina amin'ny sakafo. Hiteraka tsy fahampian'ny angovo ao amin'ny vatana izany, izay hameno tavy.
Misy karazany roa ny loharanom-angovo - glycogen ary tavy. Ny voalohany dia mora kokoa ny manova azy, ka ny vatana no mampiasa azy io aloha. Noho io antony io dia tokony haharitra antsasak'adiny farafahakeliny ny fanazaran-tena, raha tsy izany dia tsy hahatratra ny fandoroana tavy izany.
Sehatra fitondra lanja
Ny tavy dia tahiry ho an'ny vatana, ka tsy sahy misaraka amin'izy ireo. Ary koa, manomboka mihinana azy ireo fotsiny izy ireo amin'ny mavesatra antonony farafaharatsiny, noho izany dia lava ny fiofanana ary manome ny enta-mavesatra ilaina.
Misy fitaovana afaka manafaingana ireo fizotrany ireo. Ohatra, Phyto Liposaktor dia milatsaka amin'ny fihenan'ny lanjany. Izy ireo, toy ny fanafody mandoro tavy hafa, dia manafaingana ny metabolisma lipida ary mampitombo ny famokarana hormonina tompon'andraikitra amin'ny fihinanana tavy.
Manao ahoana ny fihenan-danja?
Tamin'ny voalohany dia very rano fotsiny ny vatantsika, koa rehefa mijanona tsy manao fanatanjahan-tena na sakafo ara-dalàna ianao dia miverina avy hatrany ny lanjany. Fotoana kely taorian'izay dia manomboka mihena ny habetsaky ny hozatra. Ity dingana ity dia miaraka amin'ny famoahana ny kortisol, hormonina miady saina. Noho izany, nitombo ny fahasosorana, fahaverezan'ny tanjaka.
Noho izany, na dia very lanja aza dia mila matory bebe kokoa ianao mba hananana fotoana hiverenana. Ny metabolisma dia mihazakazaka mba hahazoana toerana farany amin'ity sehatra ity.
Amin'ny ankapobeny, ny fizotry ny fahaverezan'ny lanja dia azo zaraina ho dingana 3:
Быстрая потеря веса (уходят вода и мышцы);
Медленная потеря веса (начинает медленное сжигание жиров);
Закрепляющий этап (ускоренный метаболизм остаётся работать в новом режиме).
Неправильно ожидать, что ваш вес будет уходить равномерно. Но многим, заметив, что похудение практически прекратилось, не достаёт сил дождаться окончательного результата.
Inona avy ireo fomba hahatratrarana ny fihenan-danja aloha? Ny fitambaran'ny sakafo voalanjalanja sy ny fanatanjahan-tena no tsara indrindra. Ny fihinan'ny kaloria ambany dia mampihena ny metabolisma fotsiny, toy ny fifadian-kanina. Amin'ireo fampihetseham-batana dia ny fampiofanana matanjaka no ratsy indrindra. Noho izany, ilaina ny mitandrina fanatanjahan-tena aerobika: mandeha an-tongotra amin'ny bisikileta mandeha milomano
Ny rano ampy ao amin'ny vatana dia afaka manafaingana ny fizotran'ny metabolika. Mila misotro vera eo amin'ny 8 eo ho eo isan'andro ianao hanatsarana ny fifandanjan'ny rano. Tsy maintsy mandoro kaloria bebe kokoa ny vatana rehefa misotro zava-pisotro mangatsiatsiaka, saingy tsy tokony ho mazoto eto ianao.
Mandeha haingana kokoa ny fizotran'ny metabolika miaraka amin'ny fisian'ny zava-manitra mafana amin'ny sakafo. Afaka manampy eto koa ny fanafody. Ohatra, raha mamaky ny hevitry ny dokotera momba ny zava-mahadomelina Phyto Liposaktor ianao dia afaka mahita fa manoro hevitra ny ankizivavy izy ireo mba hihena amin'ny alàlan'ity fanafody ity. Manatsara ny làlam-pandevonan-kanina izy io, manadio ny vatana ary mampihetsika ny fomba fandoroana tavy.
Ny fihenan-danja dia haingana kokoa amin'ny olona manana hozatra goavambe. Noho izany, atsangano miaraka amin'izay mandritra ny fanatanjahan-tena tsy tapaka, ka manomboka ny fizotran'ny metabolika ianao.
Alohan'ny hamoahana lanja mavesatra amin'ny lafiny rehetra, ilaina ny filan-kevitry ny dokotera!
Slimming amin'ny lamba famaohana lamba famaohana: hevitra, famaritana
Ahoana ny fomba hifanarahana amin'ny psikolojika hahavery lanja. Toe-tsaina ara-tsaina hamoizany lanja
Ahoana ny fomba hihinanana lanja raha tsy misakafo ao an-trano? Ny famoizana lanja raha tsy misakafo
Prev Sakafo Japoney tsy misy sira - mampihena ny lanjany amin'ny fomba mandaitra
Manaraka Sakafo rano - Very 5 kg tsy misy fihenjanana
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,786.